Ividiyo: Umxholo xa kuthelekiswa ne-Backlinks | Martech Zone
Abantu abaninzi bachitha kwaye bathengise ixesha labo ekusebenzeni kwewebhusayithi yabo, kwaye baqala ukukrwitsha iintloko zabo xa enye indawo inendawo ephezulu kodwa ayilungiswanga. Kungenxa yokuba ukwandiswa komxholo sisiqingatha sedabi, kukufumana ingqalelo kwezinye iisayithi ezityhala indawo yakho kwiziphumo zokuKhangela. Umsebenzi weinjini yokukhangela kukubonelela ngeziphumo ezifanelekileyo. Ukuba uninzi lwezinye iisayithi ezihlonishwayo zikhomba kuwe kwaye zithi, "uyile nto uyiyo!", Ii-Injini zokuKhangela ziya kunika ingqalelo engakumbi kuloo nto!
tags: 3bounceIziphumo zeshishiniprinceubuchwepheshe bokuzithembaukuhanjiswaiilyrisLinganisa i-CPyaphinda
Ingcebiso yesiqulatho: Ukulandelelana okuKhuthazayo kukaMonroe
Thatha uMngeni weSibini weBlogging
Oktobha 28, 2008 ngo-12: 08 PM
Ndicinga ukuba umxholo ungcono kum. Ndicacise ngakumbi ngale nto, Injongo yebhlog yakho kukufumana iindwendwe ezininzi. Ke kuya kufuneka unikeze kwaye uthumele yonke imixholo ye-niche efanelekileyo enomdla kwiindwendwe okanye ababukeli. Ulwazi olukwibhlog yakho lubalulekile, kokukhona ulwazi olulungileyo lungcono kwaye iindawo ezininzi ziya kunxulumana nawe.
I-backlink ayilinganiswanga indawo yakho elungileyo. Ezinye iiwebhusayithi beziqhagamshelwe kwenye iwebhusayithi ye-niche kodwa ukuxinana okuphantsi okanye ukulinganiswa kwe-pr kunokufumana. Ezinye iisayithi zinokusebenzisa umnqwazi omnyama indlela enye yokutshintshana.
Abatyeleli bafumana uhlaziyo lwamva nje okanye ulwazi olubalulekileyo. Ubukhulu becala iindwendwe azihoyi iisayithi xa zivula ikhonkco nge-backlinked xa zibona ukuba akukho ziqulatho ezifanelekileyo okanye ezibalulekileyo kuphela i-spamming.